Aung Thu Nyein – Institute for Strategy and Policy – Myanmar
AuthorAung Thu Nyein
Aung Thu Nyein is the Director of Communications at ISP Myanmar. He isaformer student activist in 1988 Democracy Movement and took leadership several positions in exile democracy movement. He read Masters in Public Administration (M. P.A) at Harvard University in 2002. He co-founded Vahu Development Institute (VDI) along with other expatriates in 2006, which is focusing on policy advocacy on democratization and strengthening civil society in Burma/Myanmar. He returned to Myanmar after 2011country's political reforms and joined in the Center for Economic and Social Development (CESD) of Myanmar Development Institute (MDRI). (from 2012- until 2014 Dec). He is pursuingaPh.D. study on development administration at National Institute of Development Administration (NIDA) in Bangkok.
အသွင်ကူးပြောင်းမှုများ အောင်မြင်ခြင်း၊ နောက်ပြန်ခြင်း အကြောင်းချင်းရာများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မူဝါဒရေးရာ အဆိုပြုချက်များ
ကျွန်တော်က ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားခဲ့သူ။ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ပြည်တော်မပြန်နိုင်ဘဲ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ သို့သော် ကံကောင်းထောက်မ၍ အပြောင်းအလဲများ ဖန်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲအပြီး၊ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ပြည်ပရောက်နေသူများ အိမ်ပြန်နိုင်ရေး ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် နိုင်ငံအတွင်း၌လည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအချို့ စတင်ဆောင်ရွက်နေခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာပြည်သို့...
ဆန်ရှင် အလွန်ကာလ စီးပွားရေး အလားအလာကောင်းတွေ ရှိနေပြီလား (အပိုင်း – ၃)
ဆန်ရှင် အလွန်ကာလ စီးပွားရေး အလားအလာ ကောင်းတွေ ရှိနေပြီလား (အပိုင်း – ၂)
ဆန်ရှင် အလွန်ကာလ စီးပွားရေး အလားအလာ ကောင်းတွေ ရှိနေပြီလား (အပိုင်း -၁)
ဆန်ရှင် အလွန်ကာလ စီးပွားရေး အလားအလာကောင်းတွေ ရှိနေ ပြီလား
In Commentaries, MYANMAR QUARTERLY
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က DVB Business Debate (စီးပွားရေး ဒီဘိတ် အစီအစဉ်) မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ပင်တိုင် ဆွေးနွေးသူတွေ အဖြစ် ကျနော်ရယ်၊ ကိုမောင်မောင် (ပြည်သစ်ညွန့်ဝေ) (CTUM) တို့ ဆွေးနွေးကြပါ တယ်။ စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှု (ဆန်ရှင်) တွေ ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်၊ အကျိုးရယ် အကြောင်းရယ် ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည် လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေနဲ့ များစွာ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အကယ်၍ မြန်မာ အစိုးရ (စစ်အစိုးရ) က...
အုပ်ချုပ်သူများဘက်မှအမြင် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ (CSOs) နှင့် ဆန္ဒပြပွဲများကို ထိန်းချုပ်နည်း နိသျှည်း
■ အောင်သူငြိမ်း၁ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ဘေးအန္တရာယ် ကြုံရဖွယ်၊ စိုးရိမ်ဖွယ် အခြေအနေ ရှိနေပါပြီလား။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူကြိုက်များသည့် ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့်အစိုးရ အာဏာရလာခဲ့သော်လည်း၊ များမကြာသေးမီက အထက်မြန်မာပြည်မှ အလုပ်သမားအရေး လှုပ်ရှားသူ ၁၅ ဦးကို ဒဏ်ငွေ ၅,၀၀၀ ကျပ်၊ သို့မဟုတ် တစ်လကြာ အကျဉ်းကျခံရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်ကို တွေ့ကြရသည်။...